Hood သုတ်ပဝါ, ကလေးသုတ်ပဝါ, တော်ဝင်ကတ္တီပါသုတ်ပဝါ, စောင်ထုတ်လုပ်သူ - Bailixin
ကျွန်ုပ်တို့၏ featured collection များကိုပျော့ရေချိုးသုတ်ပဝါအစုံ, အေးမြအားမိုက်ခရိုအားကစားသုတ်ပဝါအစုံနှင့်ကမ်းခြေလက်သုတ်ပုဝါ, ဖက်ရှင်မီးဖိုချောင်သုတ်ပဝါအစုံနှင့်သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အိပ်ရာစောင် set.Comprehensive စောင့်ရှောက်မှု။
သုည Twisted ချည်ခင်စီးရီး
Environmental Friendly 3s အဘယ်သူမျှမအလင်းပြန်မှုအေးဂျင့်များတွင်ရေ Absorption,
လက်သုတ်ပုဝါအဘို့အစျေးဝယ်တစ် touchy ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့, သငျသညျအပျော့နှင့်ဇိမ်ခံခံစားရကြောင်းလက်သုတ်ပုဝါကိုဝယ်ချင်ပေမယ့် '' ဂရမ် count က '' တကယ်အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး ထိုအသင်မည်သို့တူရကီဝါဂွမ်းနှင့်အီဂျစ်ဝါဂွမ်းအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြသို့မဟုတ်အရောင်များနှင့်ပုံစံများကိုတစ်ဦးသက်တံ့ထံမှကောက်ယူသလဲ? သင်သည်လည်းမကြာမီသုတ်ပဝါအတွက်ပစ်ခင်မှာအောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာလေးကိုလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ရှာဖွေရေးအဖြစ်ချောချောမွေ့မွေ့တတ်နိုင်သမျှသွားပါမည်နိုင်အောင်, အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကနေဆောက်လုပ်ရေးမှငါး key ကိုအမျိုးအစားသို့လက်သုတ်ပုဝါကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်သမျှကိုစုဝေးစေခြင်းနှင့်အုပ်စုဖွဲ့ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖွင့်: အလွန်အမင်းဆပ်ပြာအမှန်တကယ်လက်သုတ်ပုဝါမာကြောနိုင်ပါတယ်။ Plus အားကြောင့်မလိုအပ်ပါပဲ။ "သုတ်ပဝါပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေထဲကနေကျန်နေတဲ့ဆပ်ပြာကိုစုပ်ယူ, သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောအသားအရေခန်းခြောက်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကထိုမျှလောက်အမှိုက်မဆံ့ဘူး," Donna Smallin Kuper, certified ရရှိထားပြီးအိမ်သူအိမ်သားသန့်ရှင်းရေးနည်းပညာရှင်နှင့်သန့်ရှင်းရေးရိုးရိုး & ရိုးရှင်းသော၏စာရေးဆရာကပြောပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်: သင်ပုံမှန်လက်ဆေးဘို့လိုအပ်မယ်လို့တစ်ဝက်ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ, သို့မဟုတ်ပါက skip "ဆေးတိုင်းစုံတွဲ့ရှာလကာရည်ကိုသုံးပါ," Carolyn Childers, နေရာလေးကိုအကြီးအကဲအိမ်မှာအရာရှိကပြောပါတယ် ..
ညအချိန်အပူချိန်တစ်လိမ့်ကျခြင်းယူသည့်အခါ, သင့်အိပ်ရာမှပျူငှါနွေးထွေးသောနွေးထွေးမှုတစ်ခုအပိုအလွှာပေါင်းထည့်ရန်စောင်ဘို့ရောက်ရှိဖို့။ စောင်မမွငျနှင့်ဖော်ကျူးရသေးတဲ့သွားကြဖို့လေ့ - ကအိပ်ရာ၏ကြယ်ပွင့်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးငွေတောင်းခံယူ, သင်၏အသားအရေမနှောမြောနူးညံ့မှု၏ခြော့ပေးကြောင်းကိုသင်၏စာရွက်များကြောင်းကိုသင်၏ချမ်းသာပေးနိုင်သောသို့မဟုတ် duvet ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူကနှစ်ခုအကြားမှာရှိတဲ့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဟာစောင်, ယ့်ကြောင့်ဖန်တီး ပူနွေးတဲ့သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်လေထု၏တစ်ဦးအပိုအိတ်ကပ်။ ကစောင်ကိုဝယ်ယူမှကြွလာသောအခါ, သငျသညျ '' အဲဒီမှာစဉ်းစားပေလိမ့်မည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲဝါးစောင်၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ? ဒါဟာနှစျသိမျ့စာရေးကမ်းလှမ်းကြောင်းအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစောင်သင် in.Bamboo စောင် snuggle မှအဘို့ကြီးစွာသောအပျြောအပါးမှုကြောင့်ပိုကောင်းနှစ်သိမ့်ကမ်းလှမ်းကြောင်း၎င်း၏နူးညံ့မှုအများအပြားအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်စေသည်အစွန်းရောက်ပျော့ဝါးဖိုင်ဘာကနေဖန်ဆင်းတော်ကြပါတယ်။ ဝါးက၎င်း၏ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများအဘို့အကျော်ကြားသည်။ ဒါဟာသဘာဝကပေးတဲ့ antibacterial အေးဂျင့်ဖြစ်သည့်ဝါး Kun, ပါဝင်သည်။ ဒါဟာကျန်းမာရေးကိုအလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်ကြောင်းဘက်တီးရီးယားနှင့်ပိုးမွှားသတ်ပစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဖြေရှင်း Xiaoyi မြစ်၏မြောက်ပိုင်းဘေးထွက်, Logistic စက်မှုဇုံ, Hongrun လမ်း, Gaoyang ကောင်တီ, Baoding, Hebei, တရုတ် (ပြည်မကြီး),